Ahoana Ny Eritreritr’ireo Mpiara-miasa Amin’ny Global Voices Momba ireo Voka-pifidianana Solombavambahoaka Tao Torkia? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jona 2015 11:35 GMT
Tsy hanantena firy aloha aho ny amin'io resaka io. Nanana ireo nofinofiny ho an'ny ho avy ihany koa ireo olona nofidiantsika, nandritry ny fotoana tena ela. Manadino mora ny zavatra niainantsika isika ary tena mahatalanjona izany. Manadino isika anefa nisy ny tantara nasiaka [miresaka ny fisintahan'ny Kiorda sy ny herisetra] tamin'ny voalohany ka nahatonga ny antsoina hoe HDP. Hain'ny AKP tsara ny fanaovana politika, ary vitan'izy ireo ny nanova ny fijerin'ny olon'i Tiorkia, saika mikasika ny zavatra rehetra mihitsy. Ankehitriny isika nifidy ho an'ny [HDP], tsy nijery ny lasany. Tsy zavatra ratsy akory io, fa ny làlana tena nety indrindra na izany aza . Ny mampalahelo dia ny hoe tsy voatery ho hadinon'ny HDP ny tantarany sy ny tanjony tamin'ny voalohany. Ary hiasa amin'ireny heviny ireny izy ireo, raha toa ka tokony hoe hanao fiaraha-miasa. Lasa mino ny hisian'ny fiovàna isika, ary araka izany dia lasa manana fironana ny ho voalefona ivoho. Raha mba afaka ny ho feno fanantenana ho an'ny ho avy mamirapiratra bebe kokoa mantsy aho momba io vokatra io.
Burhan Kuzu, mpanao politika iray hafa an'ny AKP, nanoratra tao amin'ny Twitter toy izao “nisafidy ny faharavàna tanteraka ireo vahoaka, fa tsy ny filaminana.”
Raha jereko amin'ny ambangovangony ny zavatra rehetra — ary ataontsika hoe tsy hisy ny fifidianana mialoha ny fotoana — Hitako ho tena hanome fanantenana be ilay voka-pifidianana, noho ny antony maro. Ny antony voalohany sady lehibe indrindra dia ny nitombon'ny fahatsaràn'ny fisoloantena ao amin'io parlemanta io. Olona maro, tafiditra amin'izany ny tsy Silamo, ireo Kiorda, ary ireo vehivavy, no samy tafiditra avokoa ao amin'ny parlemanta, izay mampisy fanantenana ny hisian'ny politika feno fifanajàna, miasa ary mira lenta bebe kokoa. Raha lazaina ny fisoloantenan'ireo vehivavy, nitombo ho 18% ilay 14.3% teo aloha. Mbola tsy ampy izany, fa efa mba dingana lehibe tokoa. Mampitombo ny fanantenako ny amin'ny hoavin'ireo hetsika miaro ny zon'ireo vehivavy sy ny fitovian-jo amin'ity firenena ity ny fisian'ireo vehivavy izay fantatra tamin'ny asany nitaky ny fitovian-jo, toa an'i Filiz Kerestecioğlu (HDP), Meral Danış Beştaş (HDP) Hüda Kaya (HDP) ary Leyla Şahin Usta (AKP). Antenaina hoe taorian'izay 13 taona izay, mba mety hanomboka hisy zavatra hihatsara amin'izay ny momba ireo vehivavy.